China Impact Drill 13MM BID1303 fekitari uye bhizimisi | Benyu Zvishandiso
Inorema-basa rotary sando ...
Voltage / frequency: 220 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
Rated simba: 600W
Kwete-mutoro kumhanya: 0-2600 / min
Impact rate: 0-42000 / min
Kunonyanyisa kuchera dhayamita: 13MM
Loading chinzvimbo: 1.5-13MM
Saizi yemuchina: 270 × 63 × 210mm
Machine uremu: 1.65Kg
Gomba rinogona kuda kucherwa mudombo, samende, zvidhinha kana masonry pamusoro, uye, kuti riitwe iro basa, kubaya kwakakomba kunowanzo kuve kwakakodzera. Inokanganisa drill inosanganisa mashandiro esando yemagetsi uye chibooreso chekuputsa uye chip pane chakakora zvinhu ku
gadzira gomba kumusoro.
Benyu kukanganisa kudhiraivira kwakavakirwa kweanoshanda contractor. Iyo inokodzera iwo mabasa aripo, zvimwe zvekuwedzera sarudzo yeimpact zvibhorani zvinosanganisira zvinowirirana kumhanya uye kudzoreredza madhiraivha.
Iyo mota ine simba inonunura yakakwira torque, inoshanduka kumhanya kudzora inopa yakanyanya kuchera, inodzoserwa switch inokodzera forscrewdriving uye tambo-yekucheka, inorema-basa chuck yeakakwira kubata simba uye kuderedzwa kutsvedza.
Compactmachine chimiro, chakareruka uye chinotakurika muviri, zviri nyore kushanda mune yakaderera nzvimbo.
Nhatu-shaya ine simba chuck inosimbisa kugadzikana kwakasimba.
Ma modhi maviri ekuboora uye percussion chibooreso, yakakodzera kune akawanda-mashandisirwo.
Mubato nerabha dhizaini, yakasununguka, isina kuvhunduka, uye inodzivirira inotsvedza.
Electronics stepless kumhanya mutemo switch, nyore kumhanya kutonga.
Inotenderera kabhoni brashe mubati inovimbisa yakafanana simba kuburitsa kana ichidzosera kumashure.
Rakarurama udzamu geji, anonyatsoita anodzora kuchera udzamu, zvichiita zvinonyatsochengetedzwa oparesheni.
Kwakanaka kufefetedza kwekutonhora dhizaini, zvinobudirira kunowedzera hupenyu hwemota.
360 ° mubatsiri wekubatsira, inoshanduka kuchinjika kune zvakasiyana zvinodiwa.
Pashure: Angle Grinder Bhegi 1008xz / 180 230
Zvadaro: Impact Drill 13MM BID6182
Drill Uye Impact Mutyairi Set
Kuboora Uye Impact Set
Impact Mutyairi Drill
Impact Mutyairi Drill Bits
Inorema-basa rotary nyundo 38mm BRH 3805
Kuparadza Nyundo Bdh1600x01
Nyundo Drill 24MM BHD 2413
Kuparadza Nyundo Bdh6504